ထိုက်တန်သူ – The Only Way To Go!
Posted on February 13, 2011 February 13, 2011 by barnay
အားထုတ်မှု တစ်ခုခုအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ဆုကြေးအဖြစ် သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးကို ထိုအားထုတ်သူကိုယ်တိုင် ရရှိပါလိမ့်မည် .။ ထိုသူကို သူ့လုပ်ရပ်အတွက် ထိုက်တန်သူဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကျနော့်မှာ ငယ်ငယ်ကတိုင် ခုထိ ရရှိပိုင်ဆိုင်နေသမျှအားလုံးသည် ကျနော် အားထုတ်မှုများရဲ့ ရလဒ် ထိုက်တန်မှုပဲ ဖြစ်သည်။ ကျနော် ကောင်းကောင်း အားထုတ်ခဲ့ရင် ရရှိမည့်အရာသည် ကောင်းမွန်နေမည် ။ အဆိုးကိုသာ အားထုတ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်လည်း ကျနော် ရရှိမည့်အရာမှာ မည်သို့မျှ ကောင်းမွန်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးကို သူ့များကျွန်ဘဝမှ ရအောင် ဦးဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကြည့်ပါ။ သူ အားထုတ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးအလျောက် တတိုင်းပြည်လုံးက အပေါ်ယံမဟုတ်ပဲ စိတ်ဝိဥာဉ် တွေကကို လေးစားရတဲ့ အဖြစ် ဒါဟာ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် အဲ့ဒီလိုလေးစားမှုဖြင့် ထိုက်တန်သူပါ။ သူသာ အဲ့ဒီလို မစွမ်းဆောင်ခဲ့ပါက ယခုလို ကျနော်တို့ စိတ်ဝိဥာဉ်မှာ လေးစားခံရတဲ့ သူအဖြစ် ရှိမလာနိုင်ပါဘူး ။ လောကကြီးမှာ ထိုက်တန်မှုဟာ အပေါ်ယံ သဘောမဟုတ် အများသိမှတ်မှ မဟုတ် သူ့အလိုလိုကိုပဲ တန်ဖိုးက ညီမျှနေတာပါ။
ထိုက်တန်မှုမှာ လူတွေသတ်မှတ်ခြင်းထက် ပိုချင်လည်း ပိုမယ် လျော့ချင်လည်း လျော့မယ် ထိုသို့ ကွဲပြားမှုသည် ထိုသူ မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ဟူသည်က အတိအကျ ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတခုအတွက် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် မည်သည့် အကျိုးရလဒ်ကိုမျှ မမျှော်ကိုးပဲ စေတနာ ဖြင့် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပါစို့။ ထိုသူအား အားလုံးက ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့် တုံ့ပြန်ကြမည်။ နောက် အကြီးအကဲ တစ်ယောက်က ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုမည် ။ ထိုသူရလိုက်သည်မှာ ထို တုံ့ပြန်မှုနှင့် ချီးမြင့်မှု သာ မဟုတ် ။ တကယ်တော့ သူ့လုပ်ရပ်တွေဟာ လူတွေ သတ်မှတ်ခြင်းထက် ပိုသာသော ထိုက်တန်မှုက အလိုလိုဖြစ်နေမည် ။ ထိုအရာကို ကုသို လ်ပြုခြင်းဖြင့် နှိုင်းစာလျှင် သိသာနိုင်မည်ထင်ပါသည် ။ ကုသိုလ်ပြုသူအတွက် မည်မျှ ရပါသည်ဟု မတိုင်းတာနိုင်သလိုပင် ထိုသူမှာလည်း သူ့စေတနာနှင့် ညီမျှသော ထိုက်တန်မှု တစ်ခုက အလိုလို ဖြစ်နေမည်သာ ဖြစ်သည် ။
ခုခေတ် လူငယ်လူကြီး တော်တော်များများ မှာ သူတို့ဘဝတွေအတွက် ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သာ ကြီးမြတ်ကြသည် ဟု မှတ်ယူနေကြသည်။ ထိုအရာကို ကျနော် သိသလောက် ပြောပြချင်မိသည် ။ ထိုက်တန်မှု သို့မဟုတ် တန်ဖိုးကို ဘဝ တစ်ခုမှာ တိုင်းတာကြည့်ပါမည် ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာ ချမ်းသာ . ဘယ်လောက်ပဲ ဂုဏ်ထူး ပကာသနတွေ မြင့်မြင့် တဖက်သားအတွက် လုပ်ရပ်တွေမှာ စေတနာ မပါခဲ့ရင် ထိုတနေ့တာ ထိုဘဝဟာ တန်ဖိုးမဲ့ နေမည်သာ ဖြစ်မည် ။ ကျနော်တို့ မည်မျှပင် ဆင်းရဲစေကာမူ သူတပါးအတွက် လုပ်ပေးနိုင်သော လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ စေတနာသာ ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် ထိုတနေ့တာ ထိုဘဝဟာ မည်သူမျှ မသတ်မှတ်ပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိနေပါမည်မှာ အမှန်ဧကန်ပင် ဖြစ်သည် ။
စိတ်စေတနာကောင်းသည်သာ ဘဝတစ်ခုအတွက် ကောင်းမြတ်သော အသီးအပွင့်ဆိုတာကို သိသူနည်းပါးနေပါသည် ။ စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် လုပ်ကိုင်ပေးမှု၊ ထောက်ပံ့မှုသည် တဖက်လူမှာ ကြည်နူးခြင်း ကျေနပ်ခြင်း ၊ဝမ်းသာခြင်း ၊ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းသွားခြင်း စသည်စသည်များ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါသည် ။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲ စိတ်စေတနာ မပါ အဖြစ်သဘော ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ပေးမှု ထောက်ပံ့မှုများသည် တဖက်လူမှာ ‘ဒီလူ ငါ့ကို လုပ်ပေးတာ စေတနာမပါဘူး’ ဟု ကောက်ချက်ချမည် ။ တုံ့ပြန်မှု တခုခုရှိမယ်ဆိုလျှင်လည်း ထိုအတွက် သူ ပေးရ ၊ မပေးရ စဉ်းစားသွားမည် ။ ထိုသဘောကိုကြည်မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းမှာ တဖက်သားဆီမှ စိတ်ခံစားချက်များကို ခံစားနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိသည် ဟု သိရှိနိုင်ပါသည်။ တဖက်လူက အချောဆိုလျှင် ကိုယ်ဆီကလည်း အချောကို သာ ပေးပေလိမ့်မည်၊ တဖက်က အကြမ်းဆိုလျှင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှ “သူပေးတာကမှ မကောင်းတာ ငါလည်း မကောင်းတာပဲ ပေးရမှာပေါ့” ဟုတ် သတ်မှတ်ပေလိမ့်မည် ။ ထိုအရာများသည် လူအများအကြား သိလွယ်မြင်လွယ်နိုင်သော မတူညီသော ရလဒ်သို့မဟုတ် ထိုက်တန်မှုများပင်ဖြစ်သည် ။
ကျနော်တို့ ဘဝတွေမှာ မည်သည်ကိုမှတ်သား၍ မည်သည်ကို ချန်ထားသင့်သနည်း ဟူသည် အလွန်လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော် ထိုအသိသာပါ တကယ်လက်တွေမှာတော့ တပ်မက်ခြင်းများ အလိုလောဘများက လူ့စိတ်ကို ဦးစီးကာ တစ်ဘို့တည်း ကြည့်တတ်တဲ့ စိတ်များသာ ဖြစ်မြဲဖြစ်နေပါသည် ။ ထိုအရာသည် မိမိဘဝအတွက် တန်ဖိုးများလျှော့ချနေသည်ဟု ထိုသူများ မသိကြ၊ တွေးလည်း မတွေးမိကြ ၊ နားလည်ပေးရကောင်းမှန်းလည်း မသိ၊ စိတ်စေရာသာ လိုက်လုပ်နေရသူများ ဖြစ်ပါသည် ။ ထိုသူများကို အသိဝင်ဖို့ နားမချနိုင်ပါ။ သူတို့မှာ ငါသိငါတတ်မာန များ ရှိနေသောကြောင့် အသိစိတ်မှာ မှန်ကန်မှန်း သိပေမဲ့ ကိုယ့်ထက်ကျော်သွားမှာစိုးရိမ်မှု့ဖြင့် လက်မခံလိုကြ။ ဒါဖြစ်နေကြသဘောတရားများပါ ။
ပြဿနာများ ရှိနေခြင်း သည် တဘို့တည်း (မိမိအကျိုးကိုသာ ကြည့်ခြင်း) အတွက်သာ ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့ တဖက်သူ မည်သို့ ရှိသည် သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် ဘယ်လို ချမှတ်မည်။ ထိုသို့ မိမိစိတ်သဘောထားလေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မှုဖြင့် ဖြစ်နေကြ ပြဿနာများ ပဋိပက္ခများကို ပြေလည်သွားစေမည် ။ ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလျှင်လည်း ထို့သို ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်မှာ အခက်အခဲရှိသလို သူတစ်ပါးမှာလည်း အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါသည် ထို့အတွက် မိမိနားလည်ပေးတတ်ရမည် မိမိနားလည်ပေးသလို တဖက်သူမှလည်း ကျောက်ရုပ်၊စက်ရုပ်မဟုတ် ။ သူသည်လည်း လူသားဖြစ်တာကြောင့် နားလည်မှုများ ကူးစက်သလို တုံ့ပြန်လာပါလိမ့်မည် ။ သို့မှသာ ပြဿနာကို ပြေလည်နိုင်စေသော နည်းလမ်းများ နားလည်မှုများ ပေါ်ထွက်လာပါမည် ။
လူတစ်ယောက် အတွက် ထိုက်တန်ခြင်း မထိုက်တန်ခြင်းဟူသည် သူ့လုပ်ရပ်နောက်က အလိုလို လိုက်ပါနေမည် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ လုပ်ရပြီး မည်မျှ မရလို့ စိတ်ညစ်နေသူအတွက် တစ်ခုပြောလိုပါသည် ။ သူတစ်ပါးကို ကူညီလိုက်ရပြီး ထိုသူဆီမှ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကို မျှော်လင့်တတ်ကြသည်မှာ လူတိုင်းလိုလို ရှိတတ်ကြသည်။ ထိုကူညီခံဘက်မှ ကိုယ်ထင်သလို တုံ့ပြန်မှု မရှိသည့်အခါ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တတ်ကြသည် ။ ကူညီခဲ့တာ မှားသလိုလို ထင်တတ်ကြသည် ။ အမှန်မှာတော့ အကူအညီလို၍ ကူညီခြင်းဖြစ်သည် ။ထိုသူ့ထံမှ ကိုယ်မျှော်မှန်းသလို မရခဲ့ရင်လည်း စိတ်မခုမိပါစေနှင့်လို့ ပြောချင်မိပါသည် ။ တကယ်တော့ ကူညီလိုက်သည့် မိမိသက်ရောက်မှု တန်ဖိုးကတော့ မည်သူမျှ မသတ်မှတ်ပေမဲ့ အလိုလို ရှိနေပါသည် ။ ထိုရှိနေတဲ့ တန်ဖိုးကို မတုံ့ပြန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမည် စိတ်မသာမယာမှုဖြင့် လှီးဖဲ့ မပစ်ပါနှင့်လို့ ပြောချင်မိသည် ။ တကယ်တော့ စေတနာသည်သာ အဓိက ဖြစ်နေပါသည် ။
မိမိဘဝအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ဘဝ ဖြစ်ဖို့ စေတနာ ပါပါ ဖြင့် ပြုမူလုပ်ဆောင်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါသည် ။ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမှာ စေတနာ တရားလေးထည့်ထားပါက တုံ့ပြန်မှုများမရရှိစေကာမူ မိမိကိုယ်ကို ကျေနပ်နေမည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် မိမိဟာ တန်ဖိုးရှိသော ဘဝပိုင်ရှင်အဖြစ် ထိုက်တန်သူ ဖြစ်လာဖို့ လုပ်ရပ်တိုင်းကို စေတနာထားပြီး လုပ်တတ်ဖို့ မိမိကိုယ်ကို အားပေးကြပါလို့ ဆိုချင်ပါသည် ။ ဘဝ တစ်ခုလုံးကို မဆိုလိုချင်ပါ ဒီနေ့တနေ့ကို ဆိုကြည့်ချင်ပါသည်။ မနေ့ကအရာသည် ဒီနေ့မှာ ပြန်ယူ၍ မရနိုင်သလို ယခု ဒီနေ့သည်လည်း မနက်ဖြန်မှာ ပြန်ယူ၍ မရနိုင်ပါ ။
ထိုကြောင့် စကားတိုင်း ၊ လုပ်ရပ်တိုင်း ၊ သဘောထားတိုင်း ၊ ပြုမူလှုပ်ရှားမှုတိုင်း မှာ မိမိစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းများကို ရယူလိုမှု ကင်းကင်းဖြင့် ပေးဆပ်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါသည် ။ သို့မှသာ သင်သည် ရခဲတဲ့ လူ့ဘဝအတွက် ထိုက်တန်သူ ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲဟု ကျွန်ုပ် ဆိုချင်ပါသည် ။ ဘဝသည်လည်း အလင်းပေးနိုင်တဲ့ ဘဝအဖြစ် ဖြစ်တည်နေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည် ။ ဒီလောက်ဆိုရင် မည်သည်သည် မည်သို့ ရှိသည်ဆိုတာကို မည်သူမျှ ထပ်မပြောပဲ သိနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ယနေ့မှစ ချမ်းမြေ့သာယာပါစေ ………………………
ဖေဖော်ဝါရီ 13 ရက် .2011 (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့)